स्वास्थ्यबीमाको रकम सरकारले व्यहोर्ने- अर्थमन्त्री खतिवडा - Everest Dainik - News from Nepal
स्वास्थ्यबीमाको रकम सरकारले व्यहोर्ने- अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौँ, चैत २६ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको स्वास्थ्य बीमावापतको रकम सरकारले व्यहोर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
सामुदयिकस्तरबाट सञ्चालित नेपाल आँखा अस्पतालको ४५औँ वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताए । उनले सबै जनतालाई स्वास्थ्यबीमामा आबद्ध गराउने सरकारको नीति रहेको बताउँदै भने, “गरीबीको रेखामुनि रहेका जनता कति छन्, यकिन तथ्याङ्क आउन लागेको छ, सो आएपछि उहाँहरुको स्वास्थ्य बीमावापतको प्रिमियम रकम सरकारले व्यहोर्छ ।”
हाल ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको रु. एक लाखवापतको प्रिमियम रकम सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत व्यहोर्ने गर्छ । विसं. २०७२ चैत २५ गतेदेखि शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल ४२ जिल्लामा कार्यान्वयनमा आएको छ । हालसम्म ती जिल्लाका १५ लाख ७१ हजार ४८८ नागरिक बीमामा आवद्ध छन् ।
बोर्डले एक वर्षभित्र सबै जिल्लामा बीमाको कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गर्दैछ । मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य बीमाको पहुँचका साथमा स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको जनशक्ति, उपकरण र सेवा थप गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“नेपाल आँखा अस्पतालले पुऱ्याएको योगदान महत्वपूर्ण छ, आगामी दिनमा यसलाई आँखा उपचार तथा जनशक्ति तयारी क्षेत्रमा उत्कृष्ट केन्द्र बनाउन सरकारले सहयोग गर्नेछ”, मन्त्री खडिवडाले भने ।
ट्याग्स: Dr Yub Raj Khatiwada